E-Commerce Association Formed to Support Industry | Myanmar Business Today
Home Business Local E-Commerce Association Formed to Support Industry
E-Commerce Association Formed to Support Industry
The E-Commerce Association of Myanmar (ECAM), officially launched on March 10 at Novotel Hotel, Yangon, aims to offer opportunities and protections to local e-commerce businesses and customers and assist the country in adopting strong and precise policies and regulations for the industry.
“ECAM aims to address the difficulties, problems and issues faced by the e-commerce businesses and customers on their behalf,” association president U Aye Chan said.
Industry stakeholders in March 2019 started organizing online shops, e-commerce groups and individuals with the purpose of forming an association.
ECAM registered with the Directorate of Investment and Company Administration in July 2019 in accordance with the Myanmar Companies Act.
The association, which has over 100 members, will organize training programs with the support of Google and Facebook.
The Ministry of Commerce is regulating the industry via instructions and orders as it prepares to draftapolicy framework to adopt e-commerce laws, according to Trade Department Deputy Director General Daw Su Thet Hnin.
Local retailers have called foralaw to regulate e-commerce and help grow the industry.
E-Commerce လုပ်ငန်း၏ အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ECAM အားတရားဝင်မိတ်ဆက်
အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ E-Commerce Association of Myanmar(ECAM)အသင်းကို မတ်လ(၁၀)ရက်တွင် နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၌ တရားဝင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ အကြား အခွင့်အလမ်းများနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်မှ E-Commerceနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသော မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် အသင်းအနေဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ECAM၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးအေးချမ်းက ပြောသည်။
“ ဒီ E-Commerce နယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေရဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲပြဿနာတွေကို သူတို့အတွက်ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်တင်ပြပေးသွားဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ECAMရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်မတ်လတွင် ECAM ကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမှတဆင့် ရောင်းချနေသောကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြင့် ရောင်းချနေသော အစုအဖွဲ့နှင့် တစ်ဦးပိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချနေသော အစုအဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ အသင်းတွင် အသင်းဝင်ဦးရေ တစ်ရာကျော်ရှိပြီး ယခုနှစ်အတွင်း US ICT Council မှတဆင့် Google ၊ Facebook ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းများကို ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဦးအေးချမ်းက ဆိုသည်။
E-Commerce လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အမိန့်ညွှန်ကြားစာများထုတ်ပြန်ချက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိအချိန်၌ တိကျသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် Policy Framework ကိုရေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ကုန်သွယ်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စုသက်နှင်းက ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ အွန်လိုင်းကို အသုံးပြုကာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုများကို စိစစ်နိုင်ရန် ဥပဒေတရပ် အမှန်တကယ်လိုအပ်ပြီး စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကိုရည်ရွယ်သည့် ပြဌာန်းချက်များလည်း အွန်လိုင်းအသုံးပြုသည့် ရောင်းချမှုများတွင်လိုအပ်ကြောင်း ပြည်တွင်းလက်လီလုပ်ငန်းရှင်များက မှတ်ချက်ပေးကြသည်။
E-Commerce Association of Myanmar (ECAM) အသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားမှုဦးစီဌာနမှ ရရှိခဲ့သည်။
Previous articleWholesaler Makro Signs Supply Deal with MFVP
Next articleMonthly Refined Sugar Imports Top 10,000 Tons